भ्याकुम क्लीनरको धुलो बक्सको तुलना - स्मार्टमे
द्वारा प्रकाशित	 सोशी
दशकौं विकास पछि, भ्याकुम क्लीनरहरूले दुर्घटनाग्रस्त टक्करदेखि अवरोधबाट बच्ने गहन मूल्या evalu्कन गर्न, अनियमित अपरेशनबाट डायनामिक मार्ग योजनाको लागि शारीरिक बटनहरूबाट अनुप्रयोग नियन्त्रणमा नियन्त्रण अपडेट पूरा गरे। टेक्नोलोजीको द्रुत विकासको साथ, बुद्धिमान भ्याकुम क्लीनरहरू जनताको जीवनमा प्रवेश गरे र उनीहरूको जीवनमा राम्रो सहयोगी भए।
Roidmi को फोटो
यद्यपि, प्रयोग आवृत्ति बढ्दै गएपछि धुलो बक्सको बारम्बार सफा गर्नु प्रयोगकर्ताहरूका लागि समस्या भएको छ। त्यसकारण, धूलो स technology्कलन टेक्नोलोजी उदाउन सुरू भएको छ। सफा गरेपछि, भ्याकुम क्लीनर स्वचालित रूपमा प्रयोगकर्ताको हस्तक्षेप बिना बेस स्टेशनमा फर्कन्छ, र बिनको फोहोर बिनमा चुस्दछ, जसले प्रयोगकर्ताको समस्यालाई धुलो बिनको बारम्बार सफा गरेर समाधान गर्दछ।
हाल, बजारमा यस प्रकारको मुख्य स्मार्ट भ्याकुम क्लीनरहरू iRobot i7 +, Ecovacs T8 AIVI र Roidmi EVE PLUS हुन्।
भ्याक्यूम क्लीनरको सक्सन पावर, मुख्य ब्रश र मोपिंग ढाँचा सफाई शक्तिलाई असर गर्दछ।
१, सक्सन: डाटाबाट: रोइदमी ईभी प्लस (२1०० पीपीए)> आईरोबोट आई + + (२२०० पीपी)> इकोभ्याक्स टी A एआईवीआई (१2700०० पीपीए)।
२, मुख्य ब्रश: iRobot i2 + को अतिरिक्त, अन्य सबै तीन उत्पादनहरूले एक रोलर ब्रश प्रयोग गर्दछ। रोलर ब्रशसँग एक चर डिजाइन छ जुन धूलो सफा गर्न तलतिर घुमाउन सक्छ। IRobot i7 + ले एक डबल संयुक्त रबर ब्रश प्रयोग गर्दछ जुन जमिनमा कडासँग टाँसिन्छ र सफा गर्न सक्छ।
,, मोपिंग विधि: रोइड्मी ईभीई प्लस वाई-प्रकार तीन-चरण मोपिंग विधि अपनाउँछ, गहिरो सफाई, र यसको इलेक्ट्रोनिक पानी ट्या tank्क कुनै दाग नछोडी पानीको चुहावट मात्रा सटीक रूपमा समायोजित गर्न सक्दछ; Ecovacs T3 AIVI सँग डुअल पानी ट्या tank्की र डुअल मोपिंग मोड छ जुन विशेष सर्तहरूको आधारमा चयन गर्न सकिन्छ। उच्च फ्रिक्वेन्सी कम्पन घर्षण मोडले हठी दागका लागि राम्रो सफाई प्रभाव प्रदान गर्दछ, तर कम्पन विधिले पानीको दाग पनि निम्त्याउन सक्छ र काठको फर्शहरू सफा गर्न उपयुक्त छैन; IRobot i8 + सँग फ्लोर सफाई समारोह छैन, जुन छनौट गर्दा विचार गर्नु पर्छ।
भ्याकुम क्लीनरको ब्याट्री लाइफले सोझै यसको कार्य क्षमतामा असर गर्छ। तिनीहरूको ब्याट्री जीवन हो:
Roid Mi EVE Plus (२ min० मिनेट)> Ecovacs T250 AIVI (१8 मिनेट)> iRobot i175 + (min7मिनेट)। रोयडमी ईभी प्लसको स्थायित्व असाधारण हो, र २ minutes० मिनेटको लामो जीवनले तपाईंलाई एक पटकमा २ 75० वर्ग मिटर सफा गर्न अनुमति दिन्छ।
योजना / नेभिगेसन कौशल
योजना क्षमताले निर्वात क्लीनरले आफैंमा सामान्य सफाई गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर निर्धारण गर्दछ। यी तीन भ्याकुम क्लीनरहरूले विभिन्न नेभिगेसन टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्छन्। Roidmi EVE Plus S.० स्लम लेजर टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ र समग्र योजनालाई अझ सटीक बनाउन रोइड्मी स्मार्ट नक्शा प्रणालीसँग सुसज्जित छ; iRobot i4.0 + ले दृश्य डाटा स collecting्कलन गरेर, दृश्य स्थलहरू र योजना नक्सा बनाएर वातावरणको रूपरेखा मास्टर गर्न भिजुअल SML प्रविधि प्रयोग गर्दछ; इकोवाक्स टी A एआईवीआई लेजर + दृष्टि एसएलएएम टेक्नोलोजीको उपयोग गर्दै, पूरक टेक्नोलोजीले नेभिगेसन योजनाको सम्भावना बढाउँदछ।
धुलो संग्रह स्टेशन समारोह
माथिका तीन वैक्यूम क्लीनरहरूमा अपरेशन र धुलो संकलन प्रभावको समान सिद्धान्तहरू छन्। सफा गरेपछि, भ्याकुम क्लीनर धुलो स function्कलन समारोह सुरू गर्न स्टेशनमा फर्कन्छ र उच्च सक्शन पावरको लागि धन्यवाद धूलो कन्टेनरबाट फोहोर झोलामा मोड्छ। ती मध्ये, केवल Roidmi EVE Plus एक जीवाणुनाशक र डिओडोरिजेसन प्रणालीको साथ सुसज्जित छ। धूलो स is्कलन गरेपछि ओजोन बाँझ र डिओडोरिजेसन प्रोग्राम चल्नेछ, जुन terial० मिनेट जति लामो समयसम्म ब्याक्टेरियाको बृद्धिबाट हुने दुषित प्रदूषणबाट बच्न सक्छ; थप रूपमा, धुलो संकलन स्टेशनसँग एक एलईडी स्क्रिन छ, जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई चार्जिंग स्थिति, बाँझ अवस्था, पूर्ण धुलो अवस्था, आदि जाँच गर्न सुविधाजनक छ, एक स्पर्शको साथ धूलो स collecting्कलन सुरु गर्न इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिन थिच्नुहोस् र समाउनुहोस्।
प्राविधिक नवीनताका सर्तहरूमा, iRobot i7 + मा डबल ब्रश निस्सन्देह उपभोक्ताहरूलाई आश्चर्यचकित गर्दछ; र नेभिगेसन योजना क्षमताको हिसाबले, Ecovacs T8 AIVI दुई स्लम टेक्नोलोजीहरू जोड्दछ भ्याकुम क्लीनरलाई बाधकहरूलाई रोक्न अझ राम्रो बनाउनको लागि, तर केहि व्यक्तिले क्यामेराबाट गोपनीयता चुहावटको जोखिममाथि पनि प्रश्न उठाउँछन्?
मूल्यबाट, iRobot i7 + $ 798 249,, धुलो कलेक्टर स्टेशन २$ $ को लागि किन्न सकिन्छ; Ecovacs T8 AIVI $ 799,99, Dedusting स्टेशन पनि $ 249,99; धुलो निकाल्ने स्टेशन Roidmi ईव प्लस + around 400 को लागी लागत। कुल रूपमा, Roidmi EVE Plus को प्रदर्शन राम्रो छ। धूलो निकाल्ने स्टेशन ले प्रयोगकर्ता अनुभवलाई ध्यानमा राख्छ र मूल्य अधिक सस्तो हुन्छ। यो निस्सन्देह भ्याकुम क्लीनरहरूमा उल्लेख गरिएको सबैभन्दा लाभदायक उत्पादन हो।
लेख ROIDMI को सहकार्यमा लेखिएको थियो।
Roidmi 3S, यसको अर्थ प्रत्येक कार स्मार्ट हुन सक्छ! [भिडियो समीक्षा]
20 नोभेम्बर 2020
roidmi, रोइड्मी 3s, स्मार्ट अटो
के हुन्छ यदि हरेक कार स्मार्ट हुन सक्छ? यदि हामीसँग मात्र एउटा उपकरण छ जुन हामीलाई सुविधा बिना फोनबाट संगीत प्ले गर्न अनुमति दिन्छ, कारमा ब्लुटुथ छैन भने पनि। हो! यो Roidmi 3S हो
Roidmi ब्याट्री संग एक नयाँ पम्प देखाउँदछ
Roidmi एक कम्पनी हो जसले Xiaomi सँग सम्बद्ध छ र कार सामानहरूसँग डिल गर्दछ। भर्खरै बिक्रीको लागि नयाँ पम्प जारी गरियो, जसले बल र कारमा दुवै पा inf्ग्रा हाल्नेछ। हामीले रोइद्मीको बारेमा लेखेका छैनौं ...